Matxafka Målilla Motor | Booqo Hultsfred
Bogga hore » 🥾 arag oo samee » 🎟️ Soo jiidasho » 🖼️ Matxafyada & bandhigyada » Matxafka Målilla Motor
Carburetors, crankshafts iyo pistons isha ayaa fog! Matxafka Målilla Motor Museum, waxaa ku yaal in ka badan 100 matoorro iyo baaskiilado xawaare ku socda oo la fiiriyo. Mashiinkii ugu horreeyay ee uu dhisto aqoon isweydaarsiga Målilla ee 1907 ayaa weli ah oo wali shaqeeya.
Aqoon isweydaarsiga farsamada ee Målilla waxaa laga bilaabay 1907 qoyska Alm. Iyagu waxay ugu deeqeen matxafka. Warshadu waxay kamid ahayd warshadaha ugu horeeya deegaanka. Mashiinka ugu horeeya ee la dhisay sanadkii 1907 waa mishiinka shidaalka laga shito 8 hp oo leh jaangooyooyin fara badan oo istaroog ah waana mashiin furan. Waxaa lagu iibiyay 600 karoon milkiilaha Haddarp. Mar dambe ayaa dib loo iibsaday oo la cusboonaysiiyay. Waxay hadda la jirtaa afar kale oo ka mid ah makiinadihii ugu horreeyay ee soo saaray matxafka mishiinka.
Waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa aqoon isweydaarsi tijaabo ah oo soconayay sanadkii 1908 kaas oo sidoo kale ay ku deeqeen qoyska Alm. Halkan, dhammaan matoorada waxaa laga tijaabiyey min 6 hp ilaa 75 hp. Aqoon isweydaarsiga ayaa soo saaray gaasta, shidaalka dhimbiilaha, naaftada iyo matoorada saliida cayriin.
Mishiinka dhimbiillaha ayaa waxaa alifay 1890 kii Ingriiskii reer Herbert Akroyd. Gobolka Kalmar, ugu badnaan waxaa jiray ilaa 15 warshadood oo matoorrada ah.
Matxafka mishiinka waxaa ka mid ah Carl Alm 4 hp Ben 2 cyl oo laga soo bilaabo 1920, Tålebo nr. 101 3 hp oo la soo saaray qiyaastii 1920-meeyadii iyo DS 10 10 hp labo-stroke laga bilaabo 1952. Dhamaan matoorada ayaa shaqeynaya!
Dalxiis ku dalxiis matxafka
Haddii aad rabto inaad soo booqato matxafka, waxaad u baahan tahay inaad horay u sii ballansatid taleefanka 070-674 92 56.
159 faallooyin ku saabsan Google
3/5 8 bilood kahor
Meel wanaagsan oo xasilloon oo lagu hoydo Musqusha iyo qashinka ayaa la heli karaa. Beerta fidinta ee fiican.
5/5 10 bilood kahor
Wax badan oo la arko,
Aad u qurux badan oo si fiican loo ilaaliyo guriga. Meel gawaarida la dhigto ayaa la heli karaa.
1/5 11 bilood kahor
Waxaan rajeynaynay inaan arko matxafka furmi lahaa 10 ilaa 14 sida ku cad bogga (La cusbooneysiiyay 7 maalmood ka hor). Waxaan nimid qiyaastii 11 wax walbana waa la xiray. Murugo.
5/5 bil kahor
guri raaxo leh.